ZTE Blade V 2020 ka edozichara kpamkpam tupu ebido ya na Europe | Gam akporosis
Europe ga-anata ZTE mobile ọhụrụ, nke na-abụghị onye ọzọ Agụba V 2020. Nke a, dị ka ozi ọhụụ ọhụrụ ahụ si dị, nke bụ ihe anyị ga-ekwu maka n'okpuru, ga-abịa na Helio P70 mobile platform site na Mediatek, yabụ anyị ga-eche ọnụ ọnụ nwere uru dị ala.
Ihe osise ndi a aputara na nkpughe zuru ezu nke o gha dabere. Dabere na ndị a, aesthetics ya bụ kemgwucha adịchaghị na, ọbụlagodi, tozuru oke nke arụmọrụ dị elu.
Kedu ihe anyị ga-atụ anya n'aka ZTE Blade V 2020?
ZTE Agụba V 2020
Onye ọrụ Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) ebipụtawo akụkọ na akaụntụ Twitter ya nke nwere ọnụahịa ọ ga-ekwe omume nke ọ ga-eji nweta akara ya na njirimara niile na nkọwapụta teknụzụ nke ekwentị ahụ. Anyị ji ya ụgwọ nkọwa ndị a.
Akụkụ Blade V 2020 ihe ngebichi 6.53 nke anụ ọhịa nwere mkpebi FullHD + nke 2,340 x 1,080 pikselụ. Enweghị ihe ọ bụla ekwuru banyere teknụzụ panel, mana ebe ọ bụ na onye na-agụ akara mkpịsị aka dị na azụ nke mkpanaka ahụ, anyị kwubiri na ọ bụ IPS LCD ma ọ bụghị AMOLED. Nke a, n’aka nke ya, ga-enwe oghere n’elu aka ekpe nke pụtara na ọ pere mpe nke pere mpe, nke dị mma, yana okpokolo agba ole na ole na-ejide ihuenyo ahụ.
Dị ka anyị kwuru, octa-core Helio P70 2.1 GHz chipset bụ nke a na-etinye n'okpuru mkpuchi, tinyere ihe nchekwa 4 GB Ram na ebe nchekwa nchekwa 128 GB nke nwere ike ịgbasa site na microSD ruo 512 GB. A kpọkwara batrị ikike 4.000 mAh na-ebu ọnụ ngwa ngwa site na ọdụ ụgbọ USB-C.
Ejiri igwefoto quad mejuputa a Isi ihe 48 MP, 8 MP secondary shutter, oghere 2 MP, na otu akọwapụtabeghị ya. A na-etinye flash LED abụọ ma n'azụ n'azụ foto modulgular n'azụ.
Banyere ọnụahịa, a na-ekwu na A ga-ere ya na Europe maka euro 279 nakwa na ọ ga-adị na acha anụnụ anụnụ na ọcha. Bọchị mwepụta ya ka ga-ama, nke ka na-ezobe ya. Otú ọ dị, ọ kwesịrị ịdị nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ZTE Blade V 2020 na-apụ apụ kpamkpam tupu ebido ya na Europe